Izinga tube ezingeni umoya senziwa ngengilazi. Udonga engaphakathi tube ileveli surface lwalugobile nge endaweni engaba ezithile ugobile. I tube iqukethe ketshezi. Lapho izinga esitshekile, Bubbles bathuthe ezingeni tube kuya ekupheleni ezingeni ukucacisa isikhundla ezingeni. I emikhulu engaba ugobile odongeni engaphakathi ezingeni umoya, ayanda isinqumo, kanti elincane engaba ugobile, le ukwehlisa isixazululo. Ngakho-ke, lo engaba ugobile ezingeni umoya inquma ukunemba ezingeni umoya. Izinga umoya is ikakhulukazi esetshenziswa ukuhlola flatness, straightness, verticality futhi evundlile of imishini ukufakwa amathuluzi ahlukahlukene umshini futhi workpieces. Ikakhulukazi lapho yokulinganisa verticality, ezingeni kazibuthe ezingase zimuncwe phezu mpo zokusebenza ebusweni ngaphandle ukwesekwa manual, okuyinto kunciphisa umfutho zabasebenzi kanye ugwema Iphutha nesilinganiso kubangelwa ukushisa komzimba womuntu sika emisebeni ezingeni.
Phansi kanye ohlangothini ezingeni zomoya kwesokudla angled izakhiwo nge ubude 2000mm, futhi ukunemba ngokuvamile (0.02-0.025) mm / m. Uma umsebenzisi inezidingo ekhethekile, ke kungenziwa egcizelele ngamunye. Isakhiwo zeroing ezingeni umoya uhlukile, uma iqhathaniswa naso isakhiwo ezivamile: 1. Easy zero. 2. Ngemva ukulungiswa, ukuma zero akulula ukuba ushintsho. Njengoba kuboniswe ePhuzwini 1. Lapho V-okwenyanga inkatho phansi iwaphe- ezingeni umoya emhlabeni core Axis izikhathi 5, uma Bubbles ukuhambisa, ungakwazi ukuhlangabezana nezidingo ngokulungisa screw 2. Le nto zilungisiwe efektri futhi ngokuvamile zinjalo.
Isakhiwo ezingeni umoya buyahluka kuye ngezinkathi ngezigaba. Uhlaka uhlobo ezingeni umoya ngokuvamile yakhiwa ezingeni umoya umzimba omkhulu, ezingeni ovundlile, i isibambo adiabatic, ezingeni eyinhloko, ikhava isitja kudivayisi zero ukulungiswa. Izinga umbusi ngokuvamile yakhiwa umzimba ezingeni, ikhava ipuleti, ezingeni eyinhloko kanye nedivayisi zero ukulungiswa.
Izinga umoya isebenzisa ezingeni umoya njengoba ithuluzi wokulinganisa sokulinganisa futhi ukufunda izakhi. Izinga kuyinto uphawu ingilazi tube, futhi isigaba longitudinal we ebusweni kwangaphakathi kuyinto isiyingi arc ebusweni nge engaba ezithile ugobile. I tube ingilazi ezingeni ligcwele uketshezi nge ongaphakeme viscosity Coefficient, afana notshwala, elithi ether kanye nengxube yawo. Ingxenye ngaphandle uketshezi ngokuvamile esibizwa ngokuthi i-bubble ezingeni. Kukhona ubuhlobo nabathile phakathi engaba ugobile kwesigaba longitudinal we ebusweni engaphakathi tube ingilazi futhi ukubaluleka iziqu. Ngokusho lokhu ubuhlobo, ukuthambekela indiza kulinganiswa lingalinganiswa.
Thumela isikhathi: Jan-09-2020
Wall Bracket , Ipoto Yennyawo Ezintathu , Ubude Station , 8 komugqa uphinde 4 ovundlile Line , Vh-525 Five Line , esethembekile ,